Gudoomiyahii hore ee gobalka banaadir mudane thabit oo dhowr xil kadiiday farmaajo iyo khayre | JIGJIGA.NET
Gudoomiyahii hore ee gobalka banaadir mudane thabit oo dhowr xil kadiiday farmaajo iyo khayre
Warar hoose oo ay heshay Warbaahinta qaarkeed ayaa sheegaya in Guddoomiyihii hore ee Gobalka Banaadir Thaabit Cabdi uu diiday Dhowr wasaarad oo ay usoo bandhigeen Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Kheyre.
Marka laga tago inay isku qabteen arimo siyaasadeed hadana Thaabit saaxiibo dhow ayuu la yahay Farmaajo iyo Kheyre, taas ayaana sabab u ah in dhowr jeer ay isku dayaan inay ku qanciyaan xilal ay usoo bandhigeen.
Thaabit ayaa doonaya inuu sameysto Xisbi uu isaga musharax u noqdo sanadka 2020 si uu ugu guuleysto Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la sheegay inuu safaro kusoo kala bixin doono dalal dhowr ah si uu u kasbado Soomaalida Qurba joogta ah oo taageero culus ula garab istaagaan.
Thaabit oo hada ku sugan dalka Turkiga ayaa halkaas kula kulmaya Soomaali u badan arday waxaana la sheegay in qeyb ay ka tahay qorshahiisa uu ku doonayo in shacabka uu kusoo jiito.
Si kastaba ha ahaatee Thaabit Cabdi Maxamed ayaa waxyaabo badan qabtay intii uu ahaa Guddoomiyaha gobalka Banaadir, waxaana shacabka ay u arkaan shaqsi ku socdo wadadii uu ku noqon lahaa Madaxweynaha Soomaaliya